Lehilahy Capricorn | Capricorn Lehilahy toetra am-pitiavana, amin'ny fandriana, mampiaraka ary ny fifandraisana - Famantarana Zodiac
Ilay lehilahy Capricorn dia ny toetrany amin'ny fitiavana, mampiaraka ary fiainana
Angamba ny tena mampivadika anao dia ny fahavononany hitarika… Eny ary, tsy vonona… Toy ny miziriziry be momba azy io izy. Eny ary, manizingizina izy fa ho lohalaharana amin'ny fotoana rehetra… Fa iza no manisa, marina? Rehefa dinihina tokoa, kely saina kely fotsiny dia mora ahitsy, sa tsy izany? Eny…
Ilay lehilahy Capricorn
Ny toetrany amin'ny fitiavana, mampiaraka ary fiainana
Eny, avelao aho hanontany anao ity… Efa namaky, 'Fifty Shades of Grey' ve ianao? Ankehitriny, na dia ekena aza ny toetra Christian Grey, amin'ny fieken-keloka nataon'ilay mpitantara sy ny famaritana ny toetrany, ny Gemini Sun Sign, andao fotsiny haka ny filany hanana fahefana ary hanana ny mpiara-miasa aminy hanaiky (kohaka, kohaka, manala tenda eto.) Ankehitriny, apetraho amin'ny hyperdrive izany filàna izany. Ankehitriny, inona no anananao? Ta-dah… Ity ny anao Capricorn Man! Mbola voasarika? Mazava ho azy fa ianao!
Noho izany, ny fanontaniana dia hoe, afaka mahazo aina ve ianao amin'ny fipetrahana seza ao aorin'ity fifandraisana mety tsy misy dikany ity nefa avelao ny lehilahy Capricorn anao hitarika?
Lisitry ny atiny misy ny lehilahy Capricorn
Ahoana ny fomba hisarihana lehilahy Capricorn
Mampiaraka lehilahy Capricorn
Fanomezana tsara indrindra
Zava-misy, angano, & metafizika
Saturn, izay mifamatotra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, dia mampifandray angovo toy izany amin'i Capricorn, izay matetika lazaina fa mitana toe-tsaina pessimistic. Ny fitaoman'i Saturnus amin'ny maha-matihanina azy sy ny fanoloran-tenany dia ao am-pon'ny zavatra manosika ny lehilahy Capricorn anao. Manome ny lehilahy Capricorn ny fahefana tsy refesi-mandidy ary mahatonga azy mifanentana amin'ny asa amin'ny fahefana, governemanta, tompona orinasa, fampandrosoana aritrano, fanabeazana, fitantanana ary koa fitantanana orinasa.
Saturn no planeta mitondra mitazona ny lehilahy Capricorn. Planeta mifanaraka amin'ny asa aman-draharaha, antony manosika, faniriana ary fametrahana ny fifehezana, andraikitra ary adidy amin'ireo fitaomana ireo. Na dia planeta mifandraika amin'ny fahasarotana sy ady aza ity planeta ity dia tsy maintsy resena ny olana toy izany eo amin'ny fiainana. Rehefa mitranga izany dia mahita tombony be dia be amin'ny valiny sy traikefa ny olona.
Lehilahy capricorn amin'ny fitiavana sy amin'ny fandriana
(Venus amin'ny Capricorn)
Somary saro-kenatra sy voatokana, indraindray tsy arahin'antoka na dia ara-tsosialy aza, ny lehilahy Capricorn dia tsy maika ny hitsambikina amin'ny kianjan'ny fahalemena. Tiany ny manararaotra ny fotoanany rehefa tonga ny fotoana hisian'ny fifandraisana akaiky. Azo antoka fa tia fahafinaretana ny lahy Capricorn. Tiany ny miaraka amin'ny daty, ary miditra amin'ny resaka filozofia mahaliana, fa raha te ho akaiky ara-pihetseham-po dia hahatsapa izy fa tena manokana ianao.
Ny fahatsapana sy eritreritra lalina indrindra dia toy ny harena, ary tsy vonona mihitsy ny 'handatsaka ny perla eo alohan'ny kisoa.' Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha tsy mahazo antoka 100% ny lehilahy Capricorno fa hankamamy ny fahatsapana sy eritreritra lalina indrindra ianao dia tsy hizara fotoana tsy ho ela izy. Noho izany, raha toa ka milatsaka amin'io Capricorn io ianao dia efa nibanjina fotoana fohy ny masonao ho vonona hiandry.
Mila manam-paharetana toa an'i Neny Teresa ianao alohan'ny hanapahany hevitra hanapotika ny akorany manokana ary haneho ny tenany aminao. Toy ny hoe nihalehibe niaraka tamin'i Emily Dickinson ho mpitaiza azy izy, dia 'hilaza ny marina, fa hilaza azy misosa', mampiseho ny fihetseham-pony lalina indrindra. Saingy, hampiseho fihetsem-po amin'ny ambaratonga ihany izy amin'ny fitsapana ny fandraisana andraikitra sy ny fandraisana.
Ny zavatra dia toa manomboka miadana ao amin'ny efitrano fandriana. Saingy, raha vantany vao lasa tena akaiky anao amin'ny ambaratonga ara-pientanam-po izany dia rehefa hanafana ny raharaha, ary haingana! Ary ny zava-bita tsara indrindra ihany no antenainy. Averiko indray fa te hitarika ianao, saingy eto no tena tianao ny manoa anao raha toa ianareo roa tonta mifanaiky ny toerana hanoratanao ny andalana!
firy ny planeta ao amin'ity rafitry ny masoandro ity
Toetran'ny lehilahy Capricorn, toetrany, toetra mampiavaka azy
Ny lehilahy Capricorn dia malala-tanana amin'ny lesoka, malala-tsaina, hendry, tia olona ary manam-pahaizana be. Na izany aza, tian'izy ireo ny mandray andraikitra manerantany amin'ny fifandraisana. Ka, raha tsy mampaninona anao ny mandefitra… okay… indraindray na dia manaiky aza ianao, dia azo inoana fa hifanaraka amin'ny lehilahy Capricorn fotsiny ianao. Na izany aza, raha tsy ianao ilay karazana tia mandray ny seza aoriana ao anatin'ny fifandraisana, dia mety hipoitra ny lolom-po sy ny fankahalana. Nefa ampandrenesina mialoha, na dia izany aza, tsy miraharaha firy ny Capricorn.
Tena mahazo aina izy mitarika ary tena manizingizina ny ho mpitarika amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny maha Capricorn azy dia manana fomba fisainana voalamina tsara - mahafinaritra sy manisa ka azonao lazaina, ary ny fahaizany mandamina matetika dia mandika tsara ny tontolon'ny trano, fa tsy matetika.
Aza manao ny tsy mety amin'ny fiheverana fa ny Capricorn Man anao dia pessimist ihany koa. Na dia heveriny aza ny mety ho vokany ratsy amin'ny scenario rehetra, dia ny fahalalàny fotsiny no mivoaka hilalao. Manomana tsara ny toe-javatra mifanaraka amin'izany izy. Io fiheverana ny antsipiriany sy ny vokatra io dia tsy mahatonga azy ho mpandinika ratsy, fa ho lasa lavitra.
Raha mifamaly amin'ny lahy Capricorn ianao dia aza manantena ny handresy. Hainy amin'ny ady hevitra ary vonona ny hanondro ny diso ianao. Mahatsapa izy fa mitarika anao amin'ny làlana marina ary mampiseho anao ireo hadisoana vitanao.
Ianao, etsy ankilany, dia mety handray lesona iray izay ezahiny hampianarina anao ho manambany tena, ary tsoriko fa indraindray. Mazava fa mila faharetana ny fitiavana sy ny fiainana miaraka amin'ny Lehilahy Capricorn. Indrisy, raha maharesy ny hadalany sy ny lesoka ianao, dia hahita olona marina izay tia sy miraharaha amin'ny halalin'ny fatra rehetra.
Raha sendra azy ianao ao amin'ny tontolon'ny asany ary hitanao fa milamina sy mahomby izy. Mahomby tokoa izy ka tsy afaka ny tsy hahagaga anao. Aza gaga raha mitsidika ny tranony ianao mahita fa milamina ihany koa. Aza adino anefa fa ny lehilahy Capricorn sasany dia tsy milamina loatra mandritra ny fotoana malalaka ananany. Tena marina izany raha toa ka efa elaela izy ary mbola tsy nahita ny mahay mandanjalanja eo amin'ny asa sy ny fiainana an-trano.
Ahoana no hahalalanao an'izany? Ny toerana misy azy dia hihiaka amin'ny hevitra tsy dia miharihary loatra fa ity dia 'bachelor pad, niainana tamin'ny endriny.' Araka izany, azonao antoka ny fahafantarana fa mety hahita boaty sakafo sinoa vitsivitsy mbola mijanona ao anaty vata fampangatsiahana ianao, Mety misy boaty pizza roa ihany koa tamin'ny herinandro lasa izay maka toerana eo amin'ny latabatra lakozia. Oh, ary azo inoana fa hanana fanasan-damba mandritra ny herinandro vitsivitsy momba ny trano izy.
Raha vantany vao hitany ny fifandanjany eo amin'ny asa sy ny trano, ny namana sy ny ankohonana, ny fialamboly ary ny tanjona, dia ho azony indray ny fandaminany: Mety ho haingana kokoa izany, kanefa, raha mahazo mpiara-miasa izy dia vonona ny hitarika azy fotsiny ny làlana mety rehefa tonga ny fotoana hanaovany ba kiraro ao amin'ny hamper. Fampahatsiahivana malefaka ihany no ilainy… Fa aza avela hivadika fanakorontanana izany. Capricorn iray manampahefana dia hanomboka amin'ny fanakorontanana mihitsy.
Ny Capricorn dia mifehy ny patella, taolana, taolana, vavony ary ny hozatra peripheral ao amin'ny vatana. Ny famantarana dia mamaritra ny fonon'ny moka, hoditra, nify, volo, tonon-taolana, ary indrindra ny lohalika. Ny Capricorn dia fantatra fa mijaly amin'ny tebiteby, indrindra rehefa miatrika ny antsipirian'ny raharaha, adidy ary olana. Ireo lehilahy Capricorn koa dia mora tratran'ny lozam-pifamoivoizana, ao anatin'izany ny fiviliana, ny taolam-paty, ny taolana tapaka ary ny ratra hafa.
Satria ny famantarana ny masoandro no mifehy ny hoditra, ny lehilahy Capricorn dia olona iray izay mety hijaly amin'ny toe-batana sy ny aretina toy ny mony, eczema ary dermatitis. Ny olana ara-pahasalamana fanampiny izay natrehin'ny lehilahy Capricorn tamin'ny androm-piainany dia misy ny hatavezina, ny fikarakarana metabolika tsy mahomby, ny fikolokoloana ny fandevonan-kanina ary ny fitohanana maharitra. Ny fanaintainan'ny lohalika sy ny olana amin'ny fivezivezena, ny rheumatisme ary ny aretin-tratra dia mahazatra ihany koa ao amin'ny Capricorn Man. Ny famantarana ny masoandro dia mibaiko ny membrane mucous, mety hijaly amin'ny sery mahazatra sy fikorontanan'ny havokavoka izy.
Asa sy fitantanam-bola
Ho faly ianao mahita fa ny lehilahy Capricorn anao dia mety mahazo aina amin'ny resaka harena, ary azony avokoa ny denaria tsirairay avy. Tsy nisy nanolotra na inona na inona ny lahy Capricorn. Ny atody tsara aky napetrany dia ny vokatra mivantana amin'ny famokarany any am-piasana. Capricorn dia manam-paharetana. Noho izany, azon'izy ireo atao ny miala amin'ny karazana fanomezana fahafaham-po eo noho eo mba hifantoka amin'ny tombony mety ho maharitra amin'ny ezaka ataon'izy ireo, farafaharatsiny mandritra ny sehatry ny asa. Na dia mety tsy manankarena amin'ny fahatanorany aza izy dia ho azony antoka fa hahazo aina izy rehefa vonona hamorona fianakaviana.
Ny lehilahy Capricorn dia mety hanao tsara indrindra amin'ny sehatry ny orinasa misy toerana mandroso. Eto izy dia ho afaka hahatsapa ho mirehareha amin'ny zava-bita rehetra rehefa mianika ny tohatra orinasa izy. Ao amin'ny toeram-piasana sy ny fifandraisana, na sariaka na akaiky, ny lehilahy Capricorn dia liana amin'ny fametrahana fifamatorana maharitra ary zavatra mahazaka fitsapana sy fahoriana izay mitarika ny fiainana hanary olona.
Ny zazalahy Capricorn toa ilay andramena sy tena izy, ny tena izy, ny maha-izy azy ary mitaky fahamarinana sy fahatsoran'ny sakaizany sy ny olon-tiany. Manana saina mandinika sy azo ampiharina izy nandany ny fiainany nanandrana hitondra ny nofinofiny sy fisehoany. Raha tsy manonofy fotsiny dia toy ny The Magicien ao amin'ny tarot izay mampifanaraka ny fihetsiny sy ny sainy hanehoana ny sitrapony amin'ny fiaramanidina ara-batana.
Raha mitady lahy romantika ianao dia nahita azy tao amin'ny fanahin'ny lehilahy Capricorno. Tadidio fa afaka fotoana fohy talohan'ny nanombohany ny fihetsiketseham-pitiavany. Ny fanolorany am-boalohany ho anao dia tsy ho lavitra sy hampangatsiaka, saingy tsy hanao na inona na inona amin'ny fampahafantarana ny tena fahatsapany izany. Ny lehilahy Capricorn dia mitandrina tsara raha ny amin'ny fitiavana sy ny fitiavana. Mazava ho azy fa noho ny toetrany mahery sy henjana ivelany izay eo anoloana fotsiny ho an'ny zazalahy mamy sy mangoraka izay mora tohina.
Ny lehilahy Capricorn dia hitondra tena haingana amin'ny fifandraisany amin'ny fifandraisana. Maka ny fotoana mamy ry zareo rehefa manapa-kevitra raha te hifandray akaiky amin'ny olona iray izy ireo ary izany dia hetsika fiarovana ny tena ara-pientanam-po. Rehefa mifandray amina lehilahy Capricorn ianao dia hitaky ny fiorenan'ny fifandraisana eo amin'ny tongotra miorina izy. Aorian'izay izy vao afaka mandroso miaraka aminao am-pitokisana. Tandremo ny Capricorno, dia hitandrina anao izy.
Amin'ny maha introverts azy, Capricorn dia matetika homebodies. Ny fialamboly an-trano noho izany dia voajanahary amin'ny zavatra tiany. Ny Capricorn dia mety mamorona, ka tian'izy ireo ny zavakanto, ny fialamboly, ny fandrafetana, ny maodelin'ny fiara, ary izay mila fandaminana sy fifantohana. Ny famakiana dia fialam-boly iray hafa ankafizin'ny Capricorn satria fizotrany fandalinana lalindalina kokoa izany, mitaky fitadiavana tandindona sy fitantarana ny tantara.
Betsaka amin'ny Capricorn no mpihinana sakafo ka izany no mahatonga ny maro amin'izy ireo hifanaraka tsara amin'ireo teraka eo ambanin'ny famantarana Taurus. Ary koa, ilay lehilahy Capricorn dia tena tia mahita valiny sasany amin'ny zavatra ataony rehetra, ny zaridaina dia fialamboly izay ahafahanao mijery zavatra mamony mamy.
Ny capricorn dia tsy miraharaha ireo olona mafy feo sy mihoa-pampana ary hitan'izy ireo fa mampalahelo ny tsy fahalalam-pomba. Rehefa sendra olona manao fomba tsy mahalala fomba izy ireo dia toy ny olona mihazakazaka eo amin'ny solaitrabe ny rantsan-tànany na miraikitra fitaratra eo ambanin'ilay rantsan-tànana. Eny, sary fantatro, fa raha ny marina amin'ny kaonty no mety hitranga.
Ny resadresa-poana, ny fanendrikendrehana, ny lainga ary ny fihetsika tsy misy fanajana dia famonoana lehibe ho an'ny Capricorn voatokana. Heveriny ho toy ny mariky ny tsy fanajana fahefana izany ary izay tia fahatsapana fahefana… fantatrao izany! Ny maha-mpihinana sakafo lehibe Capricorn dia tia izay rehetra mankafy sy mankahala ireo sakafo tsy masaka ratsy.
Lalao tsara indrindra ho an'ny lehilahy Capricorn
Ny famantarana mifanentana indrindra amin'ny Capricorn dia Taurus sy Scorpio. Ny Taurus sy ny Capricorn miaraka dia mpivady mahafinaritra. Taurus, na dia mafy loha aza, dia milamina ihany koa ary afaka, mitantana ny filan'i Capricorn amin'ny firaka tsy misy olana lehibe. Izany raha atao Taurus ahazoana aina. Tsy maintsy manohy voahodidin'ny fampiononan'ny zavaboary izy ireo. Ao amin'ny efitrano fandriana, ireo famantarana roa toa ny fahatsapana fikitika, ary ny fihaonana feno faniriana dia azo antoka!
Raha ny momba an'i Scorpio sy Capricorn dia mety ihany koa na dia mety maharitra amam-bolana vao hivoatra ny fifandraisana alohan'ny hahatratrarana tena fifandraisana akaiky. Ny roa tonta dia mila mahafantatra fa afaka mifampatoky alohan'ny hanaovan'izy ireo ho marefo. Raha vantany vao samy vonona ny mpiara-miombon'antoka dia mihalalina ny fanoloran-tena.
Samy miara-miombon'antoka amin'ny filaminana, ny fianakaviana ary ny fiainana an-trano ny roa tonta. Ao amin'ny efitranon'efitra iray no anafenana ny hafanana! Samy Virgo sy Pisces dia samy manao lalao mahafinaritra amin'ny Capricorn; Virgo sy Capricorn dia miasa mafy, milalao mafy ary afaka mangoraka ny hafa. Miaraka amin'i Pisces sy Capricorn, ny roa tonta dia manolo-tena, mahatoky ary samy afaka mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fahatokisan-tena sy ny fahatokisan'ny hafa.
Ny capricorn dia manao namana tsy manam-paharoa. Sariaka izy ireo, tia fiaraha-monina ary rehefa mifanerasera amin'ny hafa dia mahatsikaiky izy ireo. Mikasika ny toetran'ny ray any Capricorn, tsara raha vantany vao lasa ray aman-dreny izy, dia hikiry amin'ny fikarakarana ny filan'ny fianakaviana manontolo.
Amin'ny maha-ray azy dia ho maodely tsara izy ary hitaky fihetsika miavaka amin'ny zanany. Satria mbola miahiahy amin'ny fampiononana ara-bola ny lahy Capricorn, dia azo inoana fa handany fotoana kely kokoa amin'ny fianakaviana any an-trano izy ary bebe kokoa amin'ny sehatry ny asa. Ny fifantohany amin'ny asany dia tsy ezaka fanaovana tsinontsinona ny fianakaviana, fa kosa mba hahazoana antoka fa afaka manome izay ilain'ny fianakaviana mifanaraka amin'izany izy.
Malala-tanana ny raim-pianakaviana Capricorn nefa mitandrina. Faly izy handoa ny filan-janany sy ny sasany tadiavin'ny zaza, fa tsy hanimba ilay zaza satria aleony mianatra ilay zaza ny tena sandan'ny dolara. Ny dadan'ny Capricorn dia faly kokoa mampita ny fahalalany an'izao tontolo izao rehefa manana fotoana handany amin'ny ankizy izy.
Ny zanakalahy Capricorn dia iray amin'ireo malala sy arovana. Na inona na inona taonany dia hampiseho faniriana aloha izy, indrindra raha omena valisoa ho an'ny hetsika natao ny vola. Raha tsy ampiasaina ho famporisihana ny raharaha ao an-trano ny vola dia mety ho tonga tsy dia mazoto mandray anjara ilay zaza Capricorn. Mety ho toa kivy izy. Mora mangataka andro izy. Ny zazalahy kely Capricorn dia hifankahazo tsara amin'ireo mpiray tam-po aminy, na dia miaina ao anaty fianakaviana mifangaro aza izy, saingy aleony ny toerana misy azy manokana mandray anjara amin'ny lalao video, mamaky, na mihaino ny mozika tiany tsy tapaka.
Capricorn sy Aries dia mirona amin'ny loha. Tadidio fa ny tandindon'ny zodiaka dia samy manana tandroka, ary samy maniry fatratra ary vonona ny hanao hetsika, ka azo inoana fa misy fifandonana lainga ho avy. Saingy, raha mampifanaraka ny hetahetany mifanaraka amin'izany ny famantarana roa, dia afaka manana fifandraisana mahomby izy ireo, na dia iray amin'ireo famantarana tsy mifanentana indrindra amin'ny Capricorn aza izany. Capricorn dia tsy maintsy mianatra miatrika ny tsy faharetan'ny Aries mitaky hetsika. Avy eo dia tsy maintsy miatrika ny filàn'i Capricorn i Aries alohan'ny hitrangany, fa ireo vato misakana ireo dia azo resena mba hanampy amin'ny famoronana izay mety ho fifandraisana mendrika.
Raha miresaka Libra sy Capricorn., Amin'ny ankapobeny dia toa tsy misy fanintonana ara-batana matetika. Toa tsy ampy ny simia, ary ny tsy fisian'ny firaisana ara-nofo dia mety hiteraka tsy fahombiazan'ny fifandraisana… Tsy fahombiazana ara-potoana. Ny Libra dia mety ho toetra tsy mahay mandanjalanja raha ny Capricorn kosa dia momba ny hetsika fanapahan-kevitra sy ny drafitra. Mikatsaka fifandanjana tsy tapaka i Libra, ary ny lahy Capricorn dia mikatsaka tsy tapaka ny valin'ny faniriany, indraindray tsy misy fiheverana ny hitazonana ny hitsiny, ny fifandanjana, na ny fiarahan-dalàna - izay fanao maharikoriko an'i Libra! Farany, ny fifandraisana misy eo amin'ny Libra sy Capricorn dia mirona haingana ho haingana raha sendra misy mirehitra mihitsy.
Fanomezana momba ny fanandroana sy zodiaka
Ny Capricorn olon-dehibe dia hanana fomba fiasa mavesatra ary mety ho toy ny famantaranandro lafo vidy kokoa eny an-tsena, fa ny famantaranandro kosa dia tonga lafatra ho an'ilay olona latsaka eo ambanin'ny zodiaka famantarana ny Sea Goat. Ity solonanarana zodiak ity no Time Manipulator! Ny capricorn dia tia izay rehetra hanampy azy ireo handamina ny entany koa. Aza adino ny fiadiany mitazona ny tranony milamina sy milamina miaraka amin'ireo ora fiasana mafy rehetra isan-kerinandro eo am-piasana. Ny fanomezana vola dia azo ampiharina foana, toy ny boky, horonan-tsary, ary kojakoja any am-piasana izay andaniany ny fotoanany.
Ny sary famantarana ny mariky ny Capricorn dia mety mifanitsy amin'ilay God Ea avy amin'ny angano babyloniana. Izy dia andriamanitra miambina ny tany amin'ny antoandro ary miverina any amin'ny ranomasina nony hariva; ity andriamanitra ity dia manasongadina ny rambon'ny vatan'osy. Angano hafa mifandraika amin'izany ny famantarana dia ny tantara grika momba ny antokon-kintana kintana Capricorn izay mifanitsy amin'ny nymph Amalthea izay mikarakara osy an-tendrombohitra. Ny famantarana ny Capricorn indraindray dia ampifandraisina amin'i Aegipan na Pan, andriamanitra tongotra. Izy io koa dia mifanitsy amin'ny tantaran'ny Sea Goat Pricus tsy mety maty, izay afaka nanodinkodina ny fotoana ary nankasitrahan'Andriamanitra.
Ny Capricorn dia mifandraika amin'ny The Devil Card ao amin'ny Tarot, izay famantarana kokoa ny mety ho an'ny lehilahy Capricorn raha tsy mahay mandanjalanja izy ireo; ny karatra dia maneho fiankinan-doha, fiankinan-doha, eo ambany fifehezan'ny iray hafa, ary fahaverezan'ny fahaleovan-tena. Ny fiheverana pessimistic dia mifandray amin'ny karatra izay mety hanaporofoana ny fifandraisana malalaka amin'ny famantarana Capricorn. Ny famantarana dia fehezin'ny Root Chakra izay eo akaikin'ny vertebrae telo voalohany ao amin'ny hazondamosina eo akaikin'ny gorodona.
Ny chakra dia kodiarana misy heriny mitaona ny dia eto an-tany, fahatsapana fiarovana, ary fahatsapana filaminana. Ny Capricorn dia mifandray amin'ny isa valo izay resonates amin'ny herin'ny tena, fahatokisan-tena, fahefana ary ny fisehoan'ny faniriana. Izy io koa dia mamaly amin'ny fisehoana, fitondrana jadona, fahaiza-manavaka, ego, pragmatisme, ambition, fijoroana amin'ny fahefana ary fifehezana.
Daty Capricorn: 22 Desambra – 19 Janoary
Marika: Ny Osy Ranomasina
Glyph midika: Osy iray antsasaky ny zavamananaina an-dranomasina.
Sanskrit: Makara, midika hoe 'Osy-tendrombohitra.'
Andian-teny lehibe: 'Mampiasa aho.'
Fitondrana anatomika: Ny hoditra sy ny lohalika; Taolana, taolana, taovam-pananahana ary volo.
Biby: Osy sy alika
Dream Archetype: Ilay Mpamitaka
Kalitao fandanjalanjana: Manana fahafinaretana, tia fihavanana ary tonga ho azy
Vorona: Falcon sy vorondolo
Vato fahaterahana: Ruby
Celtic Tree of the Month: 25 Novambra-23 Desambra (ELDER) ary (BIRCH) 24 Desambra-20 Janoary
Hevitry ny Celtic Tree: Ilay Mikatsaka sy Ilay Mahavita
Chakra: Root na Base na Muladhara
Kambana Zodiac Sinoa: omby
Mifanentana: Pisces, Scorpio, Virgo, ary Taurus
Kambana Zodiac Shinoa mahatsikaiky: omby
Singa: eto an-tany
Fanandratana ny planeta: ny diabe
Lavo: Jupiter, Neptune
Andriamanitra vehivavy: Vesta
Voninkazo: Fuchsia, Fetin'ny carnation
Miralenta: Anarana iombonana amin'ny
Kristaly fanasitranana: Turquoise, Quartz, Ruby, Garnet, ny mason'ny saka, Amethyst, ary Agate
Herbs: Valerian, Hemp, Rue, Thistle, Sorrel, Snowdrop, Nightshade, Hemlock, Hellebore, Comfrey, ary Belladonna
Teny lakile: zava-bitany
Andriamanitra lahy: Set, Pan, Hermes ary Bacchus.
Feo mozika: Fanalahidin'ny D
Nomery Vibrations: 8
Menaka: Thistle, Comfrey, Carnation ary Frankincense.
Ny gemini sy taurus dia lalao mety
Fiantraikan'ny planeta: Saturne
Loko Kilonga: Manga manga sy maitso maitso.
Loko faharoa: Brown Brown, Mainty ary Indigo.
Ilaina voalohany: Mitantana, mandray andraikitra, ary mitantana na mifehy
Fofona: Magnolia, kesika, pea ary ny ririnina
Fikambanan'ny fizaran-taona: Ririnina
Fikambanana Tarot Card: Ny devoly (XV)
Hazo: Yew, Spruce ary Cypress
Malaza: Denzel Washington, Mohamed Ali, Richard Nixon, Elvis Presley, Jim Carrey, Mel Gibson, ary Tiger Woods.
lehilahy taurus sy vehivavy gemini eo am-pandriana
fampifanarahana lahy sy vavy vehivavy ary aquarius
saturn's toerana ao amin'ny rafi-masoandro